Xukumadda Somaliland Oo Fariimo Digniin Ah U Dirtay Dugsiyada Waxbarashada Iyo Jaamacadaha Dalka |
Xukumadda Somaliland Oo Fariimo Digniin Ah U Dirtay Dugsiyada Waxbarashada Iyo Jaamacadaha Dalka
Wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland ayaa digniin adag u dirtey jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada gaarka loo leeyahay ee aan raacin nidaamka u degsan waxbarashada dalka.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Md Cabdilahi Ibraahin Habbane ayaa ku hanjabay inuu albaabada iskugu laabayo dhamaan dugsiyada sare iyo jaamacadaha gaarka loo leeyahay mudada waxbarashada lagu dhigto kusoo koobay saddex sano oo kaliya.
Sidaan waxa wasiirku ku sheegay kulan hoose uu la yeeshay madaxda iyo mulkiilayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahy ee dalka,taas oo lagaga wada hadlayay midaynta waxbarashada dugsiyada dawlada iyo kuwa gaarka loo leeyahy iyada oo halkaasi lagaga dhawaaqay wax ka badal lagu sameeyey waqitigii fasxa dugsiyada.
“Waxaan idin shegayaa oo aan ku cel-celinaya jamacadd iyo dugsi saare oo saddex sano waxbarashadooda lagu dhamaystaa jirimayaan,kuwa iminka furayna saacadaa laga bilaabo marka la ii sheego albaabada ayan u xidhayaa waxbarasho waxay u sugnaatay wasaarada waxbarashada waxaanu ogolaano ayuunbaa soconaya”ayuu yidhi wasiir Cabdilaahi Dheere.
Waxa kale oo uu shaaciyay wax ka badal lagu sameeyey waqtigii la fasaxi jiray dugsiyada hoose/dhexe iyo sare ee dalka sanad walba waxaana uu yidhi.
“waxaanu dawlad u nahay in aynu nidaamka dhawrno, waxaanu xukuumad u nahay in aanu ilalino ku talaxtaga (masuuliyadda) fasaxii waanu koobnay oo k wayn waxanu ka dhigaynaa bil iyo badh, kayarna waxaan ka dhigaynaa 15 casho ayaynu ka dhigaynaa, waxaanu kordhinaynaa saacadaha ardayda iyo macalinku wada joogaan malha khamiista waa la shaqaynayaa oo jimcaha oo kaliya yuunbaa la nasanayaa”Sidaas ayuu kusoo koobay hadaladiisii wasiirka waxbarashada Somaliland.
Si kasteba ha ahaatee talaabadan ay qaday xukumaddu gaar ahaana wasaarada waxbarashada Somaliland ayaa noqonaysa hadii ay hirgasho mid wax wayn ka tari doonta habsami u socodka hawlaha waxbarashada Somaliland.